Ikhebula lombane lingafakwa ezinhlobonhlobo ezimbili, emoyeni nangaphansi komhlaba. Ukuze umuntu afaneleke ukhetho lwesibili, kodwa kumuntu akunakwenzeka ngoba ibanga kanye nezinye izimo eziningi. Ngakho-ke, ngokuvamile abanikazi bezindlu zezwe bakhetha ukukhetha indlela yomoya yokubeka izintambo zikagesi kusukela ekusekelweni kwamandla emisha emakhaya abo.
Kunzima ukucabanga ngendlu encane noma indlu yezwe ngaphandle kwegesi. Inhlangano yokunikezela amandla esakhiweni sokuhlala yindaba ebaluleke kakhulu, ngoba ukwethembeka kwamandla kagesi ekhaya futhi, okubaluleke kakhulu, ukuphepha kwayo kuxhomeke emphumela. Ukusebenza ekuxhumeni izindlu zangasese emgqeni wamandla (LEP) kumele kwenziwe kuphela nguchwepheshe wesikhungo esitholakala kuyo. Uma ukhetha indlela yomoya yokubeka ikhebula, kuyadingeka ucingo lwe-pipe. Ukwethula ugesi kusayithi ngaphandle kwalokhu into ayikwazi ukuyenza. Kuyinto ipayipi engasensimbi, eyenzelwe ukuqinisa nokulenga izintambo nezintambo.
Kuvunyelwe ukukhuphula ezinye izinto zokusebenza ezikhoneni ezikhethekile, kubandakanya ukwamukela nokudlulisa ama-antenna. Ngendlela, iphayiphi yokwethulwa kagesi kungadingeka futhi ngenqubo engaphansi komhlaba yokudonsa. Ngemuva kwalokho, uma ibanga ukusuka emhlabathini kuze kube sekufakweni kwesakhiwo kungaphansi kwamamitha angu-2.75, ngakho-ke isicelo sayo sizodingwa. Lokhu kuyadingeka ukuze ugweme ukuthintana ngengozi ngentsambo, kodwa ubude bayo kuphela buyohlinzeka ibanga ukusuka ebusweni bomhlaba kuze kube sekungeneni kokungena.
Funda kabanzi mayelana nokusebenzisa
I-tubing yokufakelwa kukagesi iyisiqeshana sephayiphi elibheke phezulu, elibekwe ophahleni noma phezulu kwodonga lendlu. Kusuka lapho, le nto ingangena ngaphakathi. Ukuze uphakamise ipayipi yombhobho ophahleni, sebenzisa izandiso zensimbi. Kulo udonga lugxilwe ngosizo lwezinto eziyisisekelo kanye nezikuluvu. Ngesikhathi sokuphela kwebheyili, izintambo ziqaliswa futhi zikhishwe kokubili futhi kusukela esakhiweni. Ngomqondo wangempela, ipayipi lepayipi yokufakelwa kukagesi yindawo yokufaka yekhebula kagesi esakhiweni, lapho izodla khona ekuthuthukiseni amadivayisi athola amandla.
Umsebenzi othize futhi oyinhloko wale nto, ngezinye izikhathi obizwa ngokuthi "gander" emvelweni wamagesi, ukuvikela into, okungukuthi, kulokhu, isakhiwo sokuhlala, kusuka kunoma yiziphi izingozi zokungabi namandla okushisa, kanye nesiqinisekiso sokuvikeleka okuthembekile nokugcinwa kwekhebula lamandla ngaphakathi.
Uma ibanga eliphakathi komugqa wamandla nendlu lingaphezu kwamamitha angama-20, kubalulekile ukubeka i-pipe-rack eyengeziwe yokwethulwa kukagesi, cishe endaweni ethile phakathi kwale gap. Lokhu kuzokugwema ukuphula ikhebula kusukela ebucayi bayo noma emithonjeni yemvelo, isibonelo, kusuka emoyeni oqinile nakweminye imvula. Phakathi kwala maphuzu, ikhebula elikhethekile lidonsa, okuvimbela ucingo ukuba lugweme. Umqhubi unamathele kuwo ngezikhalazo. Uma udinga ukudonsa ikhebula ngaphezu komgwaqo, ukuphakama kwayo ngaphezu komhlaba kumele kube ngamamitha angu-6 nangaphezulu. Emigwaqeni yabahamba ngezinyawo kuvunyelwe kusuka kumamitha angu-3.5 nangaphezulu, kodwa akukho nhlobo ayikho ngaphansi kwalesi silinganiso. Kuvinjelwe ukucwilisa ngemithi kanye nezihlahla.
I-nuances ye-air ebekayo
I-riser-riser ekhethekile yensimbi isetshenziselwa kokubili njengomzila wekhebula, futhi njengesekelo, elisebenzela ukulungisa izilonda. Ngoba ukuyibeka kuso kuyinto elula kakhulu futhi elula kunodonga lwesakhiwo. Ukuze uxhumane futhi unokwethenjelwa ukulungisa izikrini ezizimele zokuzibamba, izikhonkwane ze-bolt nanoma yiziphi ezinye izinsimbi zensimbi. I-tubing yokufakelwa kagesi kufanele ixhunywe kumcingo womhlabathi. Kusukela kuphakheji lomhlaba ophahleni lukhona okungenani i-gap amabili yamitha. Eqinisweni, ngokuqondene nezintambo, yiziphi izinhlobo ezihambisana nezidingo ze-wiring yangaphandle ezisebenzayo.
Ngaphandle kokushiya emazingeni
Uma kungenzeka, ingabe ezinye izinhlobo zomsebenzi zingenziwa zodwa? Isibonelo sokhonkolo: kungakhathaliseki ukuthi kuzoba nezinkinga ngezinhlelo zikagesi, uma kungenziwa yile pipe-pipe ngokufakelwa kukagesi? Ivunyelwe ukuyenza ngezandla zayo , uma nje umphumela uhambisana ngokugcwele nezincazelo. Lesi sakhi senziwe ngepayipi yensimbi. Uma udinga ukufaka izintambo ezimbili, ububanzi bayo bangaphakathi kufanele bube yi-20 mm, futhi ngaphansi kwezintambo ezine - 32 mm. Ukuze ugweme ukungena kumswakama wamapayipi, ukuphela kwayo kumele kuguqulwe phansi, ngokusemthethweni kusetshenziswe ngesimo sezinga elingama-180 degrees kolunye uhlangothi, yilokho ipayipi elinganqamuki kufanele ibonakale njengokungeniswa kagesi (isithombe). Ingaphakathi kusuka ngaphakathi ukuvikela ukulwa ne-corrosion kumele iphathwe nge-bitumen, kodwa kungenzeka futhi upende u-oyela olula. Umkhawulo wendayipi esikhundleni seshayi kufanele ihlanzwe ngefayela ukuze kuqedwe i-burrs, engalimaza ukukhishwa kwekhebula.
Ngaphambilini, ngaphambi kuka-1991, izintambo ezingenayo ukufaka uphawu (AC brand) zazisetshenziselwa ukwenza ugesi lunikezwe kusayithi. Kodwa esikhathini sethu kukhona iphethini eyenzelwe ngokuqondile ukubeka umoya kwekhebula. Lesi sibonelo sinokugxilonga, okuyinto ngisho nokushisa okukhulu okushintshayo kungesabi. Kukhona okunye okunye okunye okuhlanganisa: ikhebula alilutholi futhi linye futhi alidingi ukuba khona kwekhebula elisekelayo. Ukuzikhethela lapho ukuthenga ngeke kukuphoqele ukuchofoza ubuchopho bakho, ngoba ucingo olunjalo lunikezwa kuphela ezinhlotsheni ezimbili: ucingo ezine kanye nocingo olulodwa. Ngaphezu kwalokho, umuntu akanakuhluleka ukuphawula enye inzuzo ebalulekile: kulolu hlobo lwekhebula ekuthengisweni, kunezesekeli eziningi ezengeziwe ezenzelwe ukuxhuma ngezinamathiselo. Lezi yi-gizmos elula kakhulu, engadingi noma yimiphi imizamo ekhethekile ngesikhathi sokufakwa. Kuyafaneleka ukulalela lokhu.
Ungakwazi ukufaka i-pipe-rack ngombono kagesi ngezindlela ezintathu:
Ukuhamba phezu kophahla lwesakhiwo.
Ngendlela yomklamo ohlukile.
Esikhathini sokuqala, umkhiqizo ukhonjiswe ngqo ophahleni, ipayipi idlula emagcekeni ophahleni futhi ichithelwa ohlangothini oluphambene nendawo nge-bushing porcelain. Ibhodi lokushintshela kagesi nalolu khetho luhlelwe ngaphakathi kwesakhiwo. Ukuyinkimbinkimbi kwalesi sihloko kubhekene nesidingo sokwenza umgodi ophahleni bese uwufaka uphawu.
Esikhathini sesibili, i-tubing ifakwe ngqo odongeni lwesakhiwo. Ukudlula i-septum, ngaphakathi kungena isihlangu. Lapha, futhi uhlele ukusakazwa okuyinhloko kwemigqa kagesi kusayithi. Lolu khetho lokufakelwa lubhekwa njengokulula futhi oluphephile, ngoba ikhebula lamandla lihanjiswe ngenye ingxenye engasetshenziselwa udonga.
Futhi okunye okukhethwa kukho kubhekwa njengokujwayelekile kakhulu. Kukhona isakhiwo sezinsika ezimbili, enye yazo eyenzelwe i-unit-receiving unit of the panel panel kagesi, kanti okwesibili kuyinkomba yokufaka umgogodla wokufaka ugesi kwisayithi. Ukwakhiwa kukhishwa emngceleni wendawo futhi kunikeza ukuxhumeka okujwayelekile kagesi kulesi sikhungo. Ngalendlela, iphuzu lokungena kagesi lihlukaniswe ngokuphelele endlini. Lokhu kuchaza ukuhambisana kwayo.
Kuzo zonke izinketho ezibalulwe, i-tubing isakhiwo esihlukile sobunjiniyela esinezici zayo siqu futhi sihlangabezana nezidingo zezinto. Ukucabangela lokhu ngenhla, kungenzeka ukuhlukanisa into esemqoka: ukuma kwephayiphi ye-counter kudinga ukunakwa okukhethekile ezakhiweni ezithile zesakhiwo:
Ukuhlukaniswa kwekhebula kuxhunyiwe.
Ukukhethwa kwama-insulators: i-porcelain insulators nezinye izinhlelo (ukucabangela izici zendawo).
Ukuma kwepayipi. Ukujikijela ngakwesokudla kuncike endleleni yokufaka, isibonelo, kungena odongeni nge-engela ye-degrees angu-90 ene-terminal esikuyo imishini yokuthola amandla.
Ukufakwa kwephayiphi yokwethulwa kagesi kudinga ukunakekelwa kokunye okuqondene nobuchwepheshe. Ukuphakamisa ukungena odongeni, umuntu kufanele acabangele ukuthi kwenzeke ukudonsa okushisa, ngoba kuzosusa uketshezi oluvela emoyeni obandayo ukusuka ngaphandle. Kulesi simo, umqhubi kumele avikelwe emanzini. Ukuze wenze lokhu, ugobe umgodi ebusweni obuphansi bebheyili lapho ugoba khona. Ukuze kuqiniseke futhi kukhwalithi, ukukhethwa kwezinto zokwakha kanye nokufakwa ngokwakho kungcono kakhulu okunikezwe ochwepheshe. Ukungena okulungile kwegesi endlini kungesiqinisekiso sokunikezwa kwayo okungaphazanyiswa okuvela kumandla wezokuthutha nokusabalalisa, okuthinta ukusebenza kwayo yonke imishini nemishini yasendlini.
Ukuthembeka endaweni yokuqala
Uma ufuna ukuthenga amapayipayipi amapayipi, okokuqala, udinga ukutadisha wonke ama-nuances akhayo womkhiqizo. Akufanele kunganakwa, ngoba ukukhetha okulungile kuzothinta ukuphepha nokuphila isikhathi eside kwesimiso esikhethiwe. Ulwazi mayelana nokuqaliswa kwalo kanye nezici zokufakwa kungenziwa kuphela ngumsebenzi. Ngoba, yilabo abanolwazi abanolwazi oluzocabangela izinkomba ezinjengobungozi be-glaciation, umthwalo womoya, nezinye izinto ezihambisana nokuhlala kwesakhiwo emgwaqeni. Futhi kufanele kuphawulwe ukuthi izindleko zokufaka i-tubing ngumchwepheshe akuzona eziphakeme kakhulu, kodwa izingozi ezingenzeka zokuzihlanganisa nokuhlukumeza ubuchwepheshe, zithola ithuba lokudala umonakalo omkhulu kakhulu.
Ukuqala kokusungulwa kukagesi kusayithi, okokuqala, ukuvunyelwa kwedokhumenti nokuthola imvume ngemuva kokucubungula yonke imibandela yezobuchwepheshe enhlanganweni yokunikezela amandla. Ngemuva kokuthi "ukuhamba phambili" kuhlelo lomsebenzi kusuka kusibonelo eshiwo ngenhla kuyatholakala, kungenzeka ukumema ochwepheshe ozokwenza ukufakwa kwe-wiring ngokwemibhalo eqinisekisiwe. Ukwethulwa kwegesi ibe isakhiwo esizimele kubandakanya ukufakwa kwazo zonke izingxenye zenethiwekhi yangaphakathi. Amakhomitha nama-switchgears afakiwe. Eqinisweni, ukwethulwa kukagesi endlini kungenziwa yizinhlangano zezinkontileka.
Cabanga ngesimo lapho izimo zobuchwepheshe zomnikazi wesayithi sezivele zamukelwe futhi manje kuyadingeka ukuxhuma indlu kwinethiwekhi, kodwa ukuphakama kwe-tubing ukungena kagesi akuvumeli ukuthi kungene ku-landscape ngaphandle kokususa ukubukeka kwesayithi. Kulesi simo, ungakwazi ukuqasha ochwepheshe abazokukhiqiza wena ipayipi ngayinye, okuzogcina ukuvumelanisa kwesayithi lakho, futhi ngeke kuphume isitayela sayo. Kulesi simo, kuzohambisana ngokugcwele nazo zonke izimo zezobuchwepheshe. Njengokuzikhethela: uma wenze i-pipe-pipe yangaphandle "ngaphansi kwe-birch" noma ngesimo se-abstract, umklami oyinhloko uzofihla ukungenelela kwempucuko futhi ngeke aphulukise i-aesthetics yokuphumula kwakho.
Ngesikhathi ukufakwa komugqa kagesi endlini, kumbhobho wephayiphu, kuyadingeka ukwenza ukuqhuma (okungukuthi, ukuxhuma ipayipi engxenyeni ye-zero). Ngenxa yalokhu, i-bolt yensimbi ifakwe ku-okuthiwa i-gander, ikubeka eduze kwama-insulator wokufaka. I-tubing efakiwe izohlale iyingcindezi kusukela ekungezwani kwezingcingo zompompi. Ukuze uhlawulele lokhu, izitshalo zisetshenziswe kusuka ensimbi enezingqimba ezine ububanzi buka-5 mm. Ukwesekwa okunjalo kufakwe emasongweni noma emabhotshini, ngokuthe ngqo ku-welded kuya kwe-counter eduze ne-bend yayo ephezulu ngale njongo.
Uma efakwe emathangeni, dlulisa ucingo lensimbi noma intambo yocingo enobubanzi buka 3-4 mm ukudonsa izintambo phakathi kwabo ngaphakathi kwe-tubing. Ukuze kusetshenziswe ucingo olulula, basuke bekhishwa kuqala ngendwangu elithambile, futhi i-tubing ngokwayo iqhutshwa ngaphakathi ngaphakathi nge-talc eyomile. Ngemuva kokuthi izintambo zelulelwe, amaphaphu epayipi athululelwa nge-bitumen noma ehlanganiswa ngokupakisha emaphethelweni ase-Portland yamakhemikhali angamelana nomswakama.
Amathiphu ambalwa esitokisini
Emdongeni, i-tubing ifakwe kusetshenziswa amabakaki nezikrini. Ngalesi sizathu, ngokukhonkolo, kanye nasezindongeni zezitini, bahlela ngokukhethekile izidleke zezinyosi, kokubili izingwegwe ze-insulators. Ukuxhumeka kwe-Bolted, kubalulekile ukufeza ukusetshenziswa kwezithasiselo ezinjengezikhiya, ama-washers entwasahlobo, ucingo. Lokhu kuqapha ngeke kube kuhle, njengoba ipayipi egibele phezu kophahla noma ngisho nasodongeni kuyoba lula ukujijimela njalo emiphumeleni yemimoya, ukuze izikrini zingaboni ngokuzimela. Noma kunjalo, ngaphezu kwalokho, zonke izixhumanisi eziboshiwe ekugcineni kokufakelwa kwe-input kufanele zihlutshe kakhulu ukuze zivikele ngokumelene nokushisa nge-technical petroleum jelly noma ezinye izinto zokugcoba.
I-screwdriver ye-Percussion: Ngiphambukisa, ngifuna ukukusiza
Umdwebo ohlotshisiwe wokudweba
Kanjani ukukhetha compressor emoyeni (220) Electric: izeluleko kongoti kanye nokubuyekeza. Electric emoyeni compressor (220) ngezandla zakhe
Uphawu lasendulo komlilo: incazelo, izici nomlando nesiko